रारातालको आकर्षणले पर्यटकलाई यसरी लोभ्याउँछ : फोटो कथा « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
रारातालको आकर्षणले पर्यटकलाई यसरी लोभ्याउँछ : फोटो कथा
हरिशरण न्यौपाने । वर्षदिनमा ६ सय ५० को संस्थामा पर्यटक पुग्ने गरेको रारा तालमा यतिबेला करिब एक महिनामै ३,००० भन्दा बढि पर्यटक पुगेका छन् । त्यहाँको सुन्दरतालाई एकचोटी आफ्ना आँखामा कैद गर्नेले अरुलाई पनि रारा ताल पुग्न आग्रह गरेका कारण यो क्रम बढ्दै गएको हो ।
केहि समय पहिले रारा सम्म पुग्न सम्भव छ भन्दै सोसाईटी अफ ट्राभल टुर अपरेटर्स एसोसियसन(सोट्टो–नेपाल) ले बाँकेको गाभर भ्यालीदेखि रारा तालसम्मको प्याकेज कार्यक्रम सहित प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेपछि त्यसको व्यापक प्रचारको प्रभाव नै यतिबेला रारा पुग्ने पर्यटकको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि भएको हो ।
रारा तालको सामान्य परिचय:
नेपालमा अहिलेसम्म ५,३५८ वटा प्राकृतिक तालहरु रहेको अध्ययन भईसकेको छ । त्यसमा नेपालको हुटु, मुगुमा अवस्थित राराताल नेपालकै सबैभन्दा ठूलो, गहिरो र विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा माछा पाईने ताल हो । रारा ताल जैविक बिबिद्यताका दृष्टिकोषले अति नै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । यस तालमा विश्व समुद्री जल सम्पदाका वस्तु र जीवहरुको अथाह भण्डार रहेको वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भईसकेको छ ।
रारा तालसम्म सडक बाटो भएर जाने हो भने यस्ता दृष्यहरुको अनुभव लिंदै जान सकिन्छ ।
हवाई मार्ग हुँदै ताल्चा विमानस्थल ओर्लेर पनि रारासम्म पुग्न सकिन्छ ।
रारा तालको नजिकै ठूलो चौर र घना जंगल रहेको छ । जहाँ घोडाहरु चरिरहेका देख्न सकिन्छ ।
अब हेर्नुस् राराको सुन्दर दृष्यः
यससँगै रारा किनारमा अवस्थित होटेलमा बसेर क्याम्प फायरिङ लगायतको आनन्द लिन सकिन्छ ।
सोसाईटी अफ् ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स (सोट्टो–नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको प्याकेज हेर्न यो लिंक खोल्नुहोस्। राराबास–राराताल प्याकेज !
भिडियो हेर्न यो लिंक खोल्नुहोस्, राराताल !
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक १५